Ban Ki-Moon “Geedi socodka doorashada 2016 ee Soomaaliya waxay muhiim u tahay safarka dheer ee…” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ban Ki-Moon “Geedi socodka doorashada 2016 ee Soomaaliya waxay muhiim u tahay safarka dheer ee…”
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-Moon ayaa soo dhaweeyay go’aanadii kasoo baxay shirkii madasha wadatasshiga qaran ee Muqdisho, wuxuuna ugu baaqay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadda dalka inay ka dhabeeyaan xilliyada ay u qabteen inay dhacaan doorashooyinka oo ay balantooda fuliyaan.
Sidoo kale war-qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska Ban Ki-Moon ayaa lagu sheegay in Qaramada Midoobay ay soo dhaweeynayso shaacinta jadwalka doorashada Soomaaliya iyo heshiiskii ay wada gaareen madaxda Soomaalida.
“Geedi socodka doorashada 2016 ee Soomaaliya waxay muhiim u tahay safarka dheer ee Soomaaliya ku gaareyso dimuqraadiyada” Ayuu yiri afhayeenka xogayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee warkan ka soo saaray.
Ban Ki-Moon ayaa sidoo kale qoraalkaasi baaq ugu diray guddiga doorashada iyo madaxda Soomaalida, wuxuuna ugu baaqay inay xaqiijiyaan 30% in kuraasta baarlamaanka labada aqal la siiyo haweenka, wuxuuna uga digay madaxdaas Soomaalida, waxkasta oo keeni kara dib udhac ku yimaada doorashada dalka.
“Waa in si qoto dheer ah loo hubiyaa qoondada haweenka ee siyaasada dalka, gaar ahaan guddiga saddex meelood meel waa inay xaqiijiyaan.” Ayaa lagu sheegay warka kasoo baxay xafiiska Ban Ki-Moon.
Si kastaba ha ahaatee, qoraalkaan kasoo baxay xafiiska Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-Moon ayaa kusoo beegmaya xilli 25-ka bisha October lagu wado inay dalka Soomaaliya ka dhacdo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka, halka 30-ka October ay dhaceeyso doorashada madaxweynaha Soomaaliya.